Raim-pianakaviana iray no namoy ny ainy noho ny
fianjeran’ny “rouleau” nentina kamiao lehibe iray tetsy
amin’ny lalan’ny By-pass afakomaly. Mbola nahatsiaro tena ilay
mpamily fiara karetsaka ka nentina namony hopitaly. Tsy tana anefa
ny ainy ka izao niafara tamin’ny fahafatesany izao. Marihina
fa avy naka entana tany Toamasina ity fiara
lehibe iray izao nitera-doza izao.
Naiditra am-ponja omaly tamin’ny 11 ora atoandro ny
mpanendaka hikoizana iray ao Antaniavo. Tratra teo
am-panatontosana ny asa ratsiny ity olon-dratsy ity ka tsy
afa-nitsoaka. Taorian’ny fanadihadihan’ny polisy ny tenany,
niakatra fampanoavana omaly ny raharaha ka nidoboka am-ponja ity
Jiolahy nitam-basy rao koa no voasambotry ny polisy tao
Maroantsetra afakomaly. Nanafika ny tokan-trano iray tao amin’ny
fokontany Androkaroka ireto olon-dratsy ireto ka nanao ny
fikarohana azy ny mpitandro filaminana rehefa naharay fitarainana.
Voasambotra tamin’izany izy roalahy ary nahatratrana basy vita gasy
niisa roa tany amin’izy ireo. Andalam-pikarohana ny namany kosa ny
polisy amin’izao fotoana.
Nivoaka tamin'ny : 05/03/2021
Fiahian’ny CUA ireo marefo: tokantrano 21 000 hisitraka ny « Asa avotra »
Mitohy ny fiaraha-miasan’ny CUA. Tafiditra ao anatin’izany ny fanampiana ireo marefo vokatry ny fiantraikan’ny Covid-19 ka nanombohana ny fandaharanasa “Asa avotra” eny amin’ny fokontany Andohatapenaka sy Ambohidahy, boriborintany voalohany sy fahenina. Tonga niatrika izany ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Andriantsitohaina Naina. Hisitraka sy hahazo tombony amin’izany ireo tokantrano miisa 21 000 avy amin’ny fokontany 192.Hahazo vola 5 000 Ar Hahazo vola 5 000 Ar isaky ny andro iasana ary homena fiofanana ihany koa ireo tokantrano ireo. Haharitra 20 andro ny asa hotanterahina. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa “Fiatrehana ny voina sy fanarenana” novolavolain’ny fitondram-panjakana, nankinina amin’ny ministeran’ny Mponina sy ny BNGRC izany. Namatsy vola kosa ny eo anivon’ny Banky iraisam-pirenena ary manatanteraka ny asa eny ifotony ny ao amin’ny Fid.Synèse R.L’article Fiahian’ny CUA ireo marefo: tokantrano 21 000 hisitraka ny « Asa avotra » a été récupéré chez Newsmada.
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologiie du 26 avril 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologiie du 26 avril 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nécrologie du 12 mai 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 12 mai 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 12 mai 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Antananarivo-Renivohitra: 60 isan’andro ny olona manatona CSB II
Noentanina hanatona ny CSB II akaiky azy ireo olona manana ahiahy fa voan’ny Covid-19. Maimaim-poana ny fanafody fitsaboana fa tsy maintsy ny dokotera ihany no manome ny taratasim-panafody aorian’ny fizahana.Ho fifehezana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19, noentanina hanatona ny CSB II akaiky azy ny olona manana ahiahy fa mitondra ny tsimokaretina na efa ahitana soritraretina mihitsy, araka ny toromariky ny filoha Rajoelina Andry. Nianto­han’ny fiadidiana ny Re­pobli­ka ny fanafody napetraka eny anivon’ny CSB II fa ny fi­kambanana Fitia no mitondra sy mitsinjara ny tahirim-panafody isaky ny CSB II. Nam­pitaovana fiarovana (EPI, fo­non-tanana, gel…) ny mpitsabo koa ny fikambanana Fitia hahafahan’ny mpiasan’ny fahasalamana manatanteraka ny asa anatin’ny fahatoniana eo am-pandraisana ny marary tonga. Amin’ny ankapobeny, 60 eo ho eo ny isan’ny marary manatona eny amin’ny CSB II. Misy amin’ireo mahatsiaro tsy fahasalamana ka hijery mpitsabo, ny sasany kosa nalefan’ny tompon’andraikitra avy amin’ny Tanàna Voara haka fanafody hitsaboana ny Covid-19 rehefa voamarina fa mitondra ny tsimokaretina. Mai­maim-poana ny fanafody hitsaboana ny tsimokaretina fa tsy maintsy ny dokotera ihany no manome ny tara­tasim-panafody aorian’ny fizahana, araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra ny raharaha sosialy eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika (Dasp). Tambavy CVO, Vi­tamine C, paracétamol, Magné B6, hydroxychloroquine, Azithromycine ny fanafody homena maimaim-poana ny marary. Fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny fiadidiana ny Repoblika ary ny fikambanana Fitia no ahafahana mandray ny marary sy manome fanafody avy hatrany ho an’ireo mila izany, arakaraka ny aretiny. Tao anatin’ny roa herinandro no nisian’ny hetsika ary mbola mitohy hatramin’izao eny anivon’ny CSB eto an-dRenivohitra sy ny manodidina.Vonjy A.L’article Antananarivo-Renivohitra: 60 isan’andro ny olona manatona CSB II a été récupéré chez Newsmada.
« Vehivavy mikabary »: haneho ny heviny Rasamoeliarisoa Pascaline
Mbola miteraka resaka etsy sy eroa, hatramin’izao, ny fahitana ny vehivavy mikabary. Hanazava ny heviny momba izay Rtoa Rasamoeliarisoa Pascaline, vehivavy voalohany niditra ao anatin’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy (Fimpima) efa ho 40 taona mahery izay. Fanadihadiana sy velakevitra hotontosainy ao amin’ny fandaharana « Art maro seho » Televiziona Malagasy, anio amin’ny 6 ora latsaka fahefany hariva. Famerenana ny asabotsy 27 marsa, amin’ny 11ora sy 39mn antoandro sy ny alatsinainy 29 martsa, amin’ny 10 ora latsaka fahefany maraina.Raha tsiahivina, zanak’i Auguste Fidèle Andrianasolo Rasamoelina, filohan’ny Fimpima nandritra ny 11 taona Rtoa Rasamoeliarisoa Pascaline. I Job Rakotojaona sy i Georges Andriamanantena (Rado) no niahy azy tamin’izany. Samy niaiky ireo andrarezin’ny kabary ireo fa manan-talenta tokoa Rasamoeliarisoa Pascaline.HaRy RazafindrakotoL’article « Vehivavy mikabary »: haneho ny heviny Rasamoeliarisoa Pascaline a été récupéré chez Newsmada.